किन आइरहेको छ शेयर बजारमा उछाल ?
टिप्पणी शनिबार, फागुन १७, २०७६
१२साउन २०७३ मा १८८१ अङ्कको उँचाइ छोएर ओरालो यात्रामा (बियरिस ट्रेण्ड) लागेको शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) मा पछिल्ला महीना रौनक चढेको छ । बितेका तीन महीनामा नेप्से परिसूचक झण्डै ५०० अङ्कले बढेको छ । गएको साता त उछाल नै आएपछि झण्डै २०० अङ्कको फराकिलो छलाङ मारेर नेप्से परिसूचक १६३२ विन्दुमा पुगेको छ ।
यो तीव्र गतिको कीर्तिमानी फड्को हो । लामो समय सुस्ताएको शेयर बजार चम्किएसँगै यो सुधारको उकालो यात्रा (बुलिस ट्रेण्ड) मा फर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अनुभवी लगानीकर्ता निरञ्जन टिवडेवाला भन्छन्, “घट्ने अन्तिम विन्दु छोएर फर्किएको बजार अब सुधारतिर जान्छ ।”
पछिल्लो एक दशकमा शेयर बजारले दुई वटा ठूला बियरिस प्रवृत्ति भोग्यो । १८८१ को उच्च यात्राबाट ओरालो झ्रेर अढाइ वर्षका बीच १९ फागुन २०७५ मा नेप्से ११०० विन्दुमा आइपुगेको थियो । यसको करीब एक दशकअघि पनि १५ भदौ २०६५ मा ११७५ अङ्कको उच्च विन्दुमा पुगेर ओरालो लागेको नेप्से १ असार २०६८ मा २९२ अङ्कमा ओर्लिएको थियो ।
शेयर बजारले सुधारको लय पक्रिएपछि लगानीकर्ताहरू हौसिएका छन् । शेयर लगानीकर्ताको संस्था नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल भन्छन्, “बियरिस बजारको चक्रीय प्रभाव पूरा भएर फड्को मार्ने दिशा समात्दा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् ।”
लगानीकर्ताहरूका अनुसार, शेयर बजारमा सुधार देखिनुका खास कारण छन् । पहिलो, बजारले अढाइ–तीन वर्ष ओरालो लाग्ने चक्र पूरा गरेको छ । दोस्रो, लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढेसँगै बजारमा नयाँ ठूला लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छ । बजारमा चहलपहल शुरू भएपछि स–सानो पूँजी भएका लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएर लगानी गर्न थालेको एक स्टक ब्रोकर बताउँछन् ।
बजारको कारोबार रकमले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको सङ्केत गर्छ । जस्तै, गएको साता बजारमा शेयर कारोबार रकमले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्‍यो । १५ फागुनमा अहिलेसम्मकै उच्च रु.४ अर्ब ४६ करोड मूल्यका शेयर किनबेच भए ।
१४ फागुनमै कारोबार रकमले रु.४ अर्बको सीमा पार गरिसकेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि कारोबार रकम उच्च थिए । लगानीकर्ताका विचारमा बजारले बलियो खुट्टा टेकेको प्रमाण हो, यो ।
लगानीकर्ता पौडेलका विचारमा अन्य क्षेत्रको विस्तार कमजोर हुँदा शेयर बजार चम्किन थाल्छ । घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार अपेक्षित विस्तार नभएको, निर्माण क्षेत्रसहित अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको कारण शेयर बजारमा रकम खन्याउने क्रम बढेको उनको धारणा छ ।
नेपालको शेयर बजारलाई राजनीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी टिप्पणी गरेसँगै मनोबल खस्किएको लगानीकर्ताहरूले बताउने गरेका थिए ।
कतिपय लगानीकर्ता भने कोरोना भाइरसको कारण चीनसँगको व्यापार ठप्प भएपछि त्यता जाने रकम शेयर बजारमा ओइरिएको बताउँछन् । पछिल्लो अवधिमा ब्याङ्कले लगानीकर्तालाई दिएको सहज ऋणलाई पनि बजार बढ्नुको अर्को कारण भएको लगानीकर्ता टिवडेवाला बताउँछन् ।
स्प्रेड दर (ब्याङ्कले दिने र ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको अन्तर) गणनाको नयाँ विधिका कारण ब्याङ्कहरूको नाफा घट्ने भनी आत्तिएका लगानीकर्तालाई राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६ फागुनमा ब्याङ्करहरूसँगको भेटमा लचकता देखाएपछि पनि लगानीकर्ता हौसिएका छन् ।
त्यसै कारण २० फागुनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद सकिन लागेका डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा पर्ने अनुमानले पछिल्ला साताहरूमा बजार बढेको आकलन पनि गरिएको थियो । तर, १४ फागुनमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थमन्त्री पदमा खतिवडा नै दोहोरिन सक्ने देखाए पनि १५ फागुनमा नेप्से ३६ अङ्कले उकालो चढ्यो ।
यसले खतिवडाका कारण बजारमा प्रभाव परेको भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गरिदिएको छ । “सत्तासीन दलभित्र चरम विवाद छताछुल्ल हुँदा पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नुले बजारलाई प्रभाव पार्ने अन्य आयाम बलिया छन् भन्ने देखाउँछ”, ती स्टक ब्रोकर भन्छन् ।
‘बबल’ कि ‘ग्रोथ’ ?
बजारको बियरिस प्रवृत्ति सकिएको भन्नेमा लगानीकर्ताहरू एकमत देखिए पनि कतिपय भने अहिलेको वृद्धिलाई अस्वाभाविक मान्छन् । बजार कारोबारको चरित्रले पनि दीर्घकालीन लगानीभन्दा अल्पकालीन कारोबार भइरहेको देखाउँछ ।
जस्तै, १५ फागुनको कारोबारमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जबकि, बाँकी अधिकांश उपसूचक नकारात्मक बने । त्यसअघिका दिनहरूमा पनि हरेक दिन फरक–फरक समूहमा वृद्धि भएको थियो ।
यसले लगानीकर्ताहरूले नाफाका लागि अल्पकालीन रूपमा एउटा कम्पनीको शेयर बेच्दै अर्को समूहमा पर्ने कम्पनीको शेयर खरीद गरिरहेको देखाउने शेयर लगानीकर्ता दिलीपकुमार मुनंकर्मीको दाबी छ ।
त्यसै कारण, पछिल्ला साताहरूमा बजार खासै ‘करेक्सन’ नै नभई तीव्र उकालो चढिरहेको छ । मुनंकर्मी भन्छन्, “बजार भ¥याङ जस्तो खुट्किलो चढ्दै गएको राम्रो हुन्छ, लिफ्ट जसरी उक्लिए के हुन्छ भन्न सकिन्न ।”